राष्ट्रिय - Recent Nepal News
February 24, 2021 February 24, 2021 adminLeaveaComment on तीन दलको सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रचण्ड-माधव पक्षको प्रयास सुरु, रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने !
फाल्गुन १२,काठमाडौं । सर्वोच्चको फैसला पछि नेकपामा अब सरकार गठनको लागि नयाँ समिकरणको प्रयास सुरु भइसकेको छ । आन्दोलनरत नेकपाका प्रचण्ड माधव समुहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल राजिनामा दिन माग गरेका छन् । अहिले सम्म कुनै पक्षमा नखुलेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि ओलीलाई राजिनामा दिन सुझाव दिएका छन् । ओलीलाई राजिनामा गराएर अब नयाँ सरकार […]
February 23, 2021 adminLeaveaComment on रवि लामिछानेले खोले नयाँ टेलिभिजन च्यानल
सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलगायतको संलग्नतामा नयाँ टेलिभिजन सञ्चालनमा आउने भएको छ । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी लामिछानेले ‘ग्यालेक्सी फोरके’ टेलिभिजन च्यानल शुभारम्भको घोषणा गरेका हुन् । सो टेलिभिजन नेपालमै पहिलो फोरके प्रविधिमा आधारित भएको लामिछानेले जानकारी दिए । न्यूज २४ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ सञ्चालन गरेका उनको कार्यक्रम लोकप्रिय रहेको थियो भने नयाँ टेलेभिजन खोल्नकै […]
सगरमाथाका प्रथम पर्वतारोही तेन्जिङ नोर्गेबारे चलचित्र बनाउने, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको घोसणा !
February 6, 2021 adminLeaveaComment on सगरमाथाका प्रथम पर्वतारोही तेन्जिङ नोर्गेबारे चलचित्र बनाउने, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको घोसणा !
काठमाडौँ – विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो व्यक्ति नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाबारे अमेरिकामा चलचित्र बन्ने भएको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा र मिसेल ओबामाको कम्पनी ‘हाइयर ग्राउन्ड’ले सन् २००३ मा इद डग्लासले लेखेको पुस्तक ‘तेन्जिङः हिरो अफ एभरेस्ट’ पुस्तकको आधारमा चलचित्र बनाउने घोषणा गरेको हो। द भल्चर डटकमका अनुसार बाराक र मिसेलको […]
‘केटु चढ्दै गर्दा मलाई देशले के दियो हैन, देशलाई के दिएँ भन्ने सोच्यौँ’ !
January 26, 2021 adminLeaveaComment on ‘केटु चढ्दै गर्दा मलाई देशले के दियो हैन, देशलाई के दिएँ भन्ने सोच्यौँ’ !
काठमाडौं – हिउँदमा केटु हिमाल आरोहण गरी इतिहास रचेको नेपाली टोलीले पाकिस्तानदेखि नेपालसम्म ठूलो सम्मानमात्रै पाएन, विश्वभर वाहवाही कमायो। १० जना नेपालीहरु निर्मल पुर्जा, गेल्जी शेर्पा, मिङ्मा डेभिड शेर्पा, मिङमा जी, सोना शेर्पा, मिङमा तेन्जी शेर्पा, पेमछिरी शेर्पा, दावा तेम्बा शेर्पा, किली पेम्बा शेर्पा र दावा तेन्जिङ शेर्पाले गत माघ ३ गते केटुको सफल आरोहण गरेका […]
भारतको आसाममा दुर्गेस थापाले भने – ‘लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो’ !
January 10, 2021 adminLeaveaComment on भारतको आसाममा दुर्गेस थापाले भने – ‘लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो’ !
काठमाडौं – वि’वादको पर्यायवाची नाम भैसक्यो, गायक दुर्गेश थापा। कहिले आफ्नो गीत, त कहिले अन्तर्वार्ता वि’वाद उनकै पछि दौ’डिरहेको हुन्छ। उसो त यसले दुर्गेसलाई खासै प्र’भाव पारेको हुदैन। अथवा भनौ यसले परेको प्र’भाव उनि देखाउदैनन् । लामो समयको लकडाउन पछि बल्ल सार्वजनिक कार्यक्रम, क’न्सर्ट र मेलामहोत्सव सुरु हुदैछन्। यहि मे’सोमा दुर्गेस कार्यक्रमको लागी आसाम पुगे। […]
बेलायती सेनाप्रमुखको महान कार्य, गोर्खा सैनिकको इमानदारिता देखेर आफ्नो सम्पति दिए र सदाका लागि अस्ताए !
January 9, 2021 adminLeaveaComment on बेलायती सेनाप्रमुखको महान कार्य, गोर्खा सैनिकको इमानदारिता देखेर आफ्नो सम्पति दिए र सदाका लागि अस्ताए !
काठमाडौं – बेलायतमा कार्यरत गोर्खा सैनिकसँग लामो समय काम गरेका बेलायती सेनाका पूर्व प्रमुखले आफ्नो सम्पतिको हिस्सा गोर्खा सैनिकलाई दिएका छन्। उनले आफ्नो सम्पत्तिको एक हिस्सा गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्टलाई दान गरेका हुन्। पूर्व ‘डिफेन्स स्टाफ चिफ’ लर्ड एडविन ब्रामलको गत नोभेम्बर महिनामा निधन भएको थियो । निधन पूर्व उनले एक इचछापत्र जारी गरेका थिए जसमा गोर्खा […]
महाकाली मिचेर बाँध बाँध्दै भारत !
January 3, 2021 adminLeaveaComment on महाकाली मिचेर बाँध बाँध्दै भारत !
दार्चुला – महाकालीको बाढीले २०७० मा दार्चुला सदरमुकामका १ सय ५६ घर बगाएको थियो। बाढीले निरन्तर पुर्‍याउने क्षति घटाउन नेपालले तटबन्ध बनाउन थाल्दा उतिबेला भारतीय पक्षले माइकिङ गरेर रोकेको थियो। नेपालले खोलाको किनारभन्दा सरदर सय मिटर वरै तटबन्ध बनाइरहेको थियो। भारतको आपत्ति थियो– ‘सीमा नदीमा आफूखुसी तटबन्ध बनाउँदा हाम्रो भूभाग डुब्न सक्छ। बनाउने भएर अलि परैबाट […]
December 11, 2020 adminLeaveaComment on नेपाली सेनाका अधिकृत थापाले रचे इतिहास, जिते बेलायतको सर्वोत्कृष्ट सैनिक अवार्ड
लण्डन। नेपाली सेनाका एक अधिकृत पिटर थापा बेलायतको प्रतिष्ठित स्याण्डहष्र्ट सैनिक महाविद्यालयमा सर्वोत्कृष्ट घोषित भएका छन्। केहीबेरअघि बेलायती सेनाले सार्वजानिक गरेको विवरणअनुसार, नेपाली सेनाका सेकेण्ड लेफ्टिनेण्ट थापाले यसबर्षको कोर्समा टप गर्दै बेलायती सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय तरवार (स्वर्ड) पुरस्कार जितेका हुन्। यसरी बेलायती सेनाको संसार प्रसिद्ध शाही सैनिक महाविद्यालयको सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने थोरै नेपालीमा थापा पर्न सफल […]